Tag: Dan Zarrella | Martech Zone
Tag: Dan Zarrella
Mugovera, Gunyana 13, 2014 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, Jenn Lisak akataura naDave - anozivikanwawo saKewiki - nezve nzira dzekuona dzekuona pamhepo. Kana usati watevera Kewiki… account yake ndeyekutevera Iye ave pedyo nechetatu chemamiriyoni vateveri uye zvinoshamisa basa rekuona raanoisa online zuva nezuva zvinotora mweya wako. Dave muenzaniso wakanaka wekuti ungaita sei pa Instagram! Kuedza kwake kuita kwakatungamira kwaari kushanda akatenderedza
Riripo Bhatani Rinotevera?
China, Kukadzi 21, 2008 Svondo, Kukadzi 28, 2016 Douglas Karr
Kushandisa isainzi, asi zvimwe zvacho ndezvomusikirwo. Ndinoyeuka ndichiita nharo zhinji nevanhu nezve usability pandakashanda seManeja Chigadzirwa. Kune zvimwe zvinhu zvinopihwa - senge maziso anotarisa nepadivi pechiso (kuruboshwe kuenda kurudyi), marongero avanotsika pasi, uye matarisiro avanoita chiito pazasi kurudyi. Kwete yakawanda sainzi inobatanidzwa, zvimwe zvezvinhu izvi zvese zviri zvechisikigo, uye zvimwe zve
Usave Punk, ive Hunk uye Chunk Yako Yemukati
Svondo, Kubvumbi 22, 2007 Mugovera, Kukadzi 20, 2016 Douglas Karr
Iko kunhuwa, urombo! Ndinovimba, yakabata pfungwa dzako. Dan Zarrella ane yakanakisa posvo yekubvisa zvemukati zvako. Ndiri kudzokorora mamwe emazano ake uye ndichikanda zvishoma zvangu. Chunkless: Pave paine huwandu hwakawanda hwekutsvagisa pawebhu mushanyi maitiro uye maverengero avanoita uye kutenderera zvinyorwa uye mapeji muwebhu browser. Nzira yakajairika yevashanyi vewebhu ndeyekuverenga data kana misoro mumachunks pane kuverenga